✔ Samsung ဖုန်း S4,S3,Note2 ဖုန်းအတွက်​ IMEI ပြဿနာ ​ဖြေရှင်းနည်း✔ | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
✔ Samsung ဖုန်း S4,S3,Note2 ဖုန်းအတွက်​ IMEI ပြဿနာ ​ဖြေရှင်းနည်း✔
Posted on December 11, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	♕ Samsung Galaxy-S4-S3-Note2❦♕ အစရှိတဲ့ ဖုန်း​တွေကို Rom အတင်​အချ လုပ်​လို့ပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊Caustom Rom တင်​တာပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊Upgrade/Downgrade လုပ်​တာပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊ကလိလိုက်​တာ များလို့ပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊ဘယ်​လိုအ​ကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်​ဖြစ်​​ပေါ့ဗျာ၊IMEI Code ​ပျောက်​ထွက်​သွားပြီး ဖုန်းဆက်​လို့မရ net error ဖြစ်​​နေတဲ့အဖြစ်​မျိုးနဲ့ကြုံ​တွေ့​နေရတဲ့ အခါမျိုးမှာဖုန်းပြန်ပြောလိုရအောင်လုပ်တဲ့နည်း ​ပျောက်​​နေတဲ့ IMEI Code ပြန်​ထည့်​သွင်း​ပေးမယ့်​ နည်း​လေးကို post အဖြစ်​တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။ကျုပ်​ကိုယ်​တိုင်​လည်း ဖြစ်​ခဲ့ဘူးပါတယ်​။S3 I9300 ကို offi 4.2.2 တင်​လိုက်​တာ IMEI လွင့်​ထွက်​သွားပြီး ဖုန်းပါဆက်​မရတဲ့ net error မျိုး ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်​။တိုင်​ပွတ်​ရုံတင်​မကဘူး တိုင်​ပါကျိုးတဲ့အဖြစ်​မျိုး​ပေါ့ဗျာ။အဲ ကျုပ်​လိုအဖြစ်​မျိုးကြုံ​နေတဲ့သူ​တွေ အဆင်​​ပြေပြီး တိုင်​ပွတ်​မ​နေ​အောင်​လို့ ရည်​ရွယ်​ချက်​နဲ့ ဒီ post ​လေးကို တင်​ဖြစ်​သွားတာပါပဲ။Samsung Galaxy S4/S3/Note2 ဒီဖုန်းသုံးမျိုးအတွက်​ပါပဲ။ပြုလုပ်​ပုံနည်းက​​တော့ လွယ်​ပါတယ်​။computer laptop တစ်​လုံး​လောက်​ရှိထားဖို့​တော့ လိုတာ​ပေါ့​နော်​။သူ့ရဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကတော့ Odin ထဲကနေပြီးတော့ သူ့ ဖုန်း Model နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Tar ဖိုင်လေးတွေကို PDA နေရာမှာထားပြီးStart ခလုတ်​ကို click နှိပ်​ပေးလိုက်ယုံ​လေးပါပဲ။
Auto Power ပြန်တက်လာရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ပြီးရင် ဖုန်းကို Power ပြန်ပိတ်ပြီး Recovery ထဲဝင်ကာ Restart ပြန်ချပေးလိုက်ပါ။အားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီးဆိုပါက ဖုန်းထဲကို Sim Card ထဲပြီးဖုန်းဆက်​လို့ ​ပြောလို့ ​ငွေစစ်​လို့ရသွားပါပြီ။IMEI Code လည်းပြန်မှန်သွားမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ကဲ လိုအပ်​တဲ့ ​ဒေါင်းရမယ့်​ file ​တွေကို ​အောက်​မှာ လင့်​ခ်​​တွေချ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။
This tutorial will learn you how to fix “not registered on network”, wrong IMEI for :Samsung galaxy S3 GT-I9300 model ONLY.Samsung galaxy Note2GT-N7100 model ONLY.Samsung galaxy S4 GT-I9500 model ONLY.Before starting :Backup your important data first just in case of this process corrupt your data.Download and install Samsung mobile driver (Skip this if you already have Samsung Kies) (Link below)Download MODEM.tar.md5 file then unzip it only one time (Link below)Download Odin3 then unzip it (Link below) Disable the antivirus software, Close Samsung Kies and disconnect any device connected to USB ports on your computer.Flashing instructions :1- Run “Odin3” as administrator, Click on PDA button and navigate to Modem.tar.md5 file that you extracted.2 – Shut down your device and make sure your device is completely off3 – Put your device into download mode by pressing and holding (Volume Down + Home + Power) buttons4 – Press Volume up to continue
5 – Connect the device to your computer by USB cable and wait until you getasign in Odin (ID:COM section) and “Added” in message box.6 – Make sure re-partition is NOT SELECTED [Very important]
7- Click Start and waitafew seconds until you see “PASS!”.
Notes :Do not disconnect the cable or turn off the device while flashingI am not responsible if something wrong happened to your device (use this AT YOUR OWN RISK)Install Samsung Mobile Driver or Samsung Kies if you don’t seeasign in Odin (Step 5)This process takes maximum 1 minuteIn some cases this won’t fix the wrong IMEI or “not registered on network” messageIf your device stuck in boot loop after downgrading, factory reset your device from recovery mode (Vol up+Home+Power)
This entry was posted in Note2 အတွက်​ IMEI ပြဿနာ​ဖြေရှင်းနည်း, S3, Samsung S4. Bookmark the permalink.
← ✔ BS Player v1.12.164 Apk(for android)	✔ BS Player v1.12.164 Apk(for android) →
One thought on “✔ Samsung ဖုန်း S4,S3,Note2 ဖုန်းအတွက်​ IMEI ပြဿနာ ​ဖြေရှင်းနည်း✔”	ln lin says:	December 12, 2013 at 1:01 pm	galaxy S2 အတွက်ရောရှိဘူးလား၊